Akọrọ-ụdị USB Granulating Plant - China Henan Suyuan Lanning
Kemgbe ụwa, e nwere dịgasị iche iche nke n'efu Gịnị, ihe mgbaru ọsọ anyị bụ iji merie ọnwụ nke ọla kọpa na ndị ọzọ ọla n'oge nhazi maka imu, ime ya ọzọ na nkà mmụta sayensị, na akpaaka. Ọ na-ebelata ọrụ, dịkwuo mgbake ọnụego, na Ya mere mma mmepụta arụmọrụ. The dum mmepụta akara e mere na-na nkà mmụta sayensị, environmentally friendly, na-eri-irè.
Mayslynn Recycling Company mepụtara mbụ USB Granulator imegharị ihe maka iji akara na China na 1996. N'oge gara aga ka afọ 20, na-aga n'ihu ọhụrụ na njikarịcha, anyị anọwo na-anọgide na ndị ụlọ ọrụ na-eduga larịị, na ọnọdụ dị ka benchmark n'ime ụlọ ọrụ na China. Anyị na-e arụnyere ihe karịrị 500 tent nke USB Granulator gburugburu ụwa, nke na-egosi elu ogo ahịa ude.
TMJ nlereanya USB Granulator akara nwere ike egweri ndị n'efu Gịnị site ndinuak, ike ndọda nkewa, vibration nkewa, magnetik nkewa Filiks ikewara plastic na ọla kọpa, ígwè, wdg ... mgbake ọnụego bụ ruo 99%.
1.Intelligent akara na ezi uche layout, akpaka shutdown nchedo n'oge bufee ọrụ.
2.Can-onwem na shredder dị ka mbụ crusher, inyeaka ígwè nri, nke belata ọrụ na-eri.
3. Na elu-nkenke sorting usoro ma ugboro akara, mgbake ọnụego nwere ike ịbụ dị elu dị ka 99%.
4. ndinuak usoro eji elu-ike nwetụ agụba aro na elu ndinuak arụmọrụ, agụba ihe onwunwe bụ alloy ígwè.
5. Crusher na-onwem na obi jụrụ usoro, iji gbochie plastic si n'ịnọgide ọla kọpa mgbe okpomọkụ na-na-elu.
6. ọ akụrụngwa na-arụ ọrụ mechiri ọzọ ájá mwepụ usoro, na irè akara nke ájá, gburugburu ebe obibi enyi na enyi.
CG USB granulator
1. The ngwá bụ modular na kọmpat Ọdịdị na ihe arụ nke nta ebe.
2. Ezigbo ke udi, mma ma mụ, mfe iji rụọ ọrụ, ọ dịghị mgbagwoju anya echichi na naanị otu onye na-ahụ maka ọrụ nwere ike ịrụ ọrụ mgbe a kpaliri.
3. Sorting usoro: elu-nkenke sorting na ugboro akara etinyere. The sorting ọnụego bụ ruo 99%.
4. ndinuak usoro: elu-osisi ike obiab pupụtara nwere elu ndinuak arụmọrụ. Agụba ka nke alloy nchara na inogide ogologo ndụ.
5. The ngwá na-arụ ọrụ mechiri zere ọnwụ nke ihe onwunwe, na ájá umu anwuru na ndị ọzọ na-akpa iyo na ikuku nyo usoro n'ụzọ dị irè ịchịkwa ájá.
Akọrọ-ụdị ọla kọpa imegharị ihe maka iji mmepụta akara:
The gburugburu ebe obibi nke na mmepụta akara kwesịrị akọrọ ma dị ọcha. Ọtụtụ nākpacha aji na ndinuak usoro bịakwute ikewapụ ihe. The igwe set peels anya ezinụlọ scrap cable wires nke plastic n'ọbọ na ọla kọpa, nke kewara ha n'ime plastic papaịrọs na ọla kọpa ntụ ntụ. The dum n'efu ọla kọpa imegharị ihe maka iji mmepụta akara a na-achịkwa PLC (programmable Logic njikwa) ma e wezụga akwụkwọ ntuziaka ihe nri. Ọ nwere akpaka ọrụ nke bufee ịdọ aka ná ntị na mkpọchi mechie-ala. Ọ dị mfe ma dị mma na-arụ ọrụ.
1.Compact Ọdịdị na ezi uche okirikiri nhọrọ ukwuu, mfe iji wụnye.
2.Controlled site PLC. Na-aga n'ihu ndepụta, ọgụgụ isi ọrụ, mfe iji rụọ ọrụ.
3.The Ọdịdị nke igwe dị mfe maka nkwaghari na njem.
4.The abụọ grinder adopts ọzọ pupụtara eduga elu arụpụtaghị, ala ụzụ na anụ na-agba ọsọ.
5.The separator ọnụego maka nkwurịta okwu waya nwere ike iru ruo 97%, weere waya iru ruo 95%.
6.The ọkara ihe onwunwe nhazi maka ugboro abụọ nke ekewapụ ndị metal na-abụghị metal ngụkọta.
7.No ájá tinyekwa, ájá nkewa ọnụego nwere ike iru ruo 99%.
Mmepụta (T / H)
JZ-DX4000: The ikike nke ọkọlọtọ mmepụta akara bụ 2000kg / h na 4000kg / h. Nwekwara nnukwu ụdị nwere ike dị ka ndị ahịa chọrọ chepụta ya. (Dị ka 6T / H, 8T / H, 10T / H)
Previous: USB stripper Machine SCS-150
Osote: Ike-ụdị Ọla kọpa Waya Granulator
Aluminum USB Granulator
USB Granulator Machine
USB Waya Recycling Machine
USB Waya Recycling Plant
Gịnị wires Granulator
ọla kọpa USB Granulator
Ọla kọpa USB Waya Recycling Machine
Ọla kọpa Granulate Recycling Machine
Ọla kọpa Granulator
Ọla kọpa Granulting Machine
Ọla kọpa Waya Granulation Machine
Ọla kọpa Waya egweri Machine
Ọla kọpa Waya egweri kewara Machine
Ọla kọpa Waya Recycling Line
ọla kọpa Waya Recycling Machine
Ọla kọpa Waya Water Granulator Equipment
Ọla kọpa Waya Wet Type Granulator Equipment
Electric Gịnị Granulator Machine
Industrial Ọla kọpa Waya Recycling Equipment
Mini Ọla kọpa Waya Granulator
Scrap USB Ọla kọpa Granulator
scrap Ọla kọpa USB Granulator
Scrap Ọla kọpa Granulator
scrap Ọla kọpa Waya Recycling Equipment
Scrap Ọla kọpa Waya Recycling Machine
Obere Ọla kọpa USB Granulator
Obere Ọla kọpa Waya Granulator
Obere Type Ọla kọpa Waya Granulator
Taia Iji Rubber nsogbu dị iche iche Plant
Eji Waya Granulator
Imefusị Ọla kọpa Waya Granulator
Waste Ọla kọpa Waya Recycling Equipment
Waya Ịcha Machine
Waya ịbịaru Machine
Waya Recycling Machine
Waya Recycling Machines